Isku xidhka Gudbiyaha Studio, Qalabka Isku xidhka Gudbinta Istuudiye, Gudbiyayaasha Raadiyaha FM
Weligaa ma maqashay isku xirka gudbiyaha istuudiyaha ama STL? Waa nidaam baahinta oo inta badan lagu isticmaalo istuudiyaha dhijitaalka ah ee laga dhisay magaalada. Waxay la mid tahay buundada isku xirta istuudiyaha iyo baahinta FM-ta, taasoo u oggolaanaysa in waxyaabaha baahinta laga sii gudbiyo istuudiyaha illaa FM-ta FM-ta, iyo xallinta dhibaatada baahinta FM-yada liita ee magaalada. Waxaa laga yaabaa inaad dhibaatooyin badan kala kulanto nidaamkan. Wadaaggani waxa uu u soo bandhigayaa istuudiyaha iyo isku xidhka gudbiyaha si uu jawaabo kuugu siiyo.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan isku xirka gudbiyaha istuudiyaha, Aynu yeelano faham aasaasi ah oo ku saabsan istuudiyaha si aan u gudbino isku xirka kahor waxbarashadeena dheeraadka ah.
Qeexida isku xidhka gudbiyaha istuudiyaha
Xiriirinta gudbiyaha istuudiyaha waxaa sidoo kale loo yaqaan istuudiyaha si loogu gudbiyo IP, ama isku xirka gudbiyaha istuudiyaha, ama STL si toos ah. Marka loo eego qeexida Wikipedia, waxay tilmaamaysaa a qalabka isku xirka istuudiyaha Ka soo diraya idaacada ama telefishinka maqalka iyo muqaalka istuudiyaha baahinta ama goobta asalka u ah gudbiyaha raadiyaha, gudbiyaha talefiishanka, ama xarun kor u qaadis ah oo ku taal meel kale. Tan waxaa lagu dhammeeyaa adeegsiga isku xirka mikrowave-ga dhulka ama iyadoo la isticmaalayo fiber optic ama xiriirrada kale ee isgaarsiinta ee goobta gudbinta.
2 Noocyada Isku xirka Gudbiyaha Studio
Xidhiidhiyayaasha gudbinta istuudiyaha waxa loo qaybin karaa isku xidhka gudbiyaha istuudiyaha analooga ah iyo isku xidhka gudbiyaha istuudiyaha dhijitaalka ah (DSTL).
Isku xirka gudbiyaha istuudiyaha Analog waxaa badanaa loo adeegsadaa idaacadaha waaweyn ama xarumaha telefishinada ( idaacadaha ama xarumaha telefishinada ee heer gobol ama ka sareeya), oo leh hawlo ka hortag ah oo xoog leh.
Isku xirka gudbiyaha istuudiyaha dhijitaalka ah waxaa badanaa loo isticmaalaa raadiyaha ama xarumaha telefishinada ee u baahan inay gudbiyaan maqal iyo muuqaal fogaan dheer. Waxay leedahay calaamad hoose oo lumis waxayna ku habboon tahay gudbinta fogaanta (ilaa 60 km ama 37 mayl).
Maxay istuudiyaha baahinta u qaataan STL? Sida aan wada ognahay, si loo kordhiyo daboolida Gudbiyeyaasha raadiyaha FM-ka, inta badan waxa lagu dhejiyaa taawarrada idaacadaha ee buurta dusheeda. Laakiin waa wax aan macquul ahayn oo caqli-gal ah in la dhiso istuudiyo baahinta buurta dusheeda. Waad ogtahay, istuudiyaha baahinta badanaa wuxuu ku yaal bartamaha magaalada.
Waxaa laga yaabaa inaad weydiiso: maxaad u dejin weyday gudbiyaha raadiyaha FM istuudiyaha? Tani waa su'aal wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhismayaal aad u badan oo ku yaal bartamaha magaalada taas oo si weyn u dhimi doonta baahinta idaacadaha FM-ta. Aad bay uga waxtar yar tahay dejinta idaacada FM-ta ee buurta dusheeda.
Sidaa darteed, nidaamka STL waxa uu ka ciyaaraa doorka xudunta u gudbinta calaamadaha maqalka iyo muuqaalka ah ee istuudiyaha ilaa FM-ta laga baahiyo buurta, ka dibna laga sii daayo barnaamijyada idaacadaha meelo kala duwan iyada oo loo marayo gudbiyaha FM-ka.
Marka la soo koobo, iyada oo aan loo eegin analoogga STL ama dhijitaalka ah STL, waa qaybaha qalabka baahinta bar-ilaa-point ee ku xidha istuudiyaha iyo gudbiyaha raadiyaha FM.
Jaantuskan soo socdaa waa jaantus kooban oo mabda'a shaqo ah oo isku xidhka gudbinta istuudiyaha ay bixiso FMUSER. Mabda'a shaqada ee nidaamka STL ayaa si kooban loogu qeexay shaxanka:
Soo gelinta - Marka hore, istuudiyaha wuxuu soo geliyaa calaamadda maqalka ee nuxurka baahinta iyada oo loo marayo isdhexgalka stereo interface ama interface AES / EBU wuxuuna soo geliyaa calaamadda muuqaalka iyada oo loo marayo interface ASI.
Baahinta - Ka dib markii gudbiyaha STL uu helo signalka maqalka iyo muuqaalka muuqaalka, anteenada gudbiyaha STL waxay calaamadahan u gudbin doontaa anteenada qaataha STL ee xadiga soo noqnoqda ee 100 ~ 1000MHz.
Qaadashada - Qaadaha STL waxa uu helayaa signalka maqalka iyo muuqaalka muuqaalka, kaas oo lagu sii farsamayn doono qalabka kale ee elegtarooniga ah waxaana loo gudbin doonaa gudbiyaha baahinta FM-ta.
Sida mabda'a baahinta raadiyaha, Studio Transmitter Link wuxuu ku baahiyaa calaamadaha 3 tillaabo: Gelin, baahinta, iyo sidoo kale helista.
Ma heli karaa isku xirka istuudiyow ii gaar ah?
"Miyaan yeelan karaa STL ii gaar ah?", Waxaan maqalnay su'aashan marar badan. Maadaama nidaamyada microwave STL ay inta badan qaali yihiin, shirkado badan oo warbaahineed ayaa dooran doona inay kiraystaan ​​nidaamyada STL. Si kastaba ha ahaatee, weli waa kharash badan marka wakhtigu sii socdo. Maxaad u iibsan weyday ADSTL ee FMUSER, waxaad ogaan doontaa in qiimihiisu la mid yahay kan kirada. Xitaa haddii aad leedahay miisaaniyad xaddidan, waxaad yeelan kartaa nidaamkaaga STL.
Xirmada baahinta dhijitaalka ah ee ADSTL ee FMUSER waxay dabooshaa istuudiyaha si ay u gudbiso qalabka isku xirka idaacadaha, oo ay ku jiraan gudbiyaha istuudiyaha iyo qaataha leh nidaamka kontoroolka guddiga LCD, anteenada Yagi birta ultra-light oo faa'iido badan leh, fiilooyinka anteenada RF ilaa 30m, iyo qalabyada loo baahan yahay, kuwaas oo dabooli kara baahiyahaaga kala duwan:
Keydi kharashkaaga - ADSTL ee FMUSER waxay taageeri kartaa ilaa 4-way stereo ama gelinta maqalka sare ee dijitaalka ah (AES / EBU), iyada oo laga fogaanayo korodhka qiimaha iibsashada nidaamyada STL ee badan. Waxa kale oo ay taageertaa tignoolajiyada SDR, taas oo kuu ogolaanaysa inaad ku cusboonaysiiso nidaamka STL iyada oo loo marayo software halkii aad dib u iibsan lahayd qalabka.
Buuxi shuruudaha xargaha soo noqnoqda ee badan - ADSTL ee FMUSER kaliya ma taageerto 100-1000MHz band soo noqnoqda laakiin sidoo kale waxay taageertaa ilaa 9GHz, kaasoo buuxin kara shuruudaha gudbinta ee idaacadaha kala duwan. Haddii aad u baahan tahay inaad habayso inta jeer ee shaqada oo aad ka gudubtay codsiga waaxda maaraynta deegaanka, fadlan xor ayaad u tahay inaad nala soo xidhiidho si aad u habayso qaabka ADSTL iyo inta jeer ee aad u baahan tahay.
Gudbinta calaamadaha tayada sare leh - ADSTL ee FMUSER waxay leedahay waxqabad ka-hortagga faragelinta aad u wanaagsan. Waxay gudbin kartaa daacadnimo sare HD-SDI maqal iyo muuqaal fogaan dheer. Calaamadaha maqalka iyo muqaalka waxa loo gudbin karaa munaaradda gudbinta raadiyaha ku dhawaad ​​iyada oo aan wax khasaare ahi dhicin.
ADSTL ee FMUSER hubaal waa xalka isku xirka istuudiyaha gudbiyaha ee ugu kharash-oolsan adiga. Haddii aad xiisaynayso, ku dhufo halkan macluumaad dheeri ah.
Anteeno noocee ah ayuu Nidaamka STL Isticmaalaa?
Anteenada Yagi waxaa inta badan lagu isticmaalaa nidaamyada STL, kaas oo loo isticmaali karo polarization toosan iyo mid toosan si loo bixiyo jiheynta wanaagsan. Anteenada Yagi ee aadka u fiican waxay inta badan leedahay sifooyinka fududaynta raadiyaha aad u fiican, faa'iido sare, miisaan fudud, tayo sare leh, qiimo jaban, iyo iska caabin cimilada.
Waa maxay inta jeer ee uu isticmaali karo Nidaamka STL?
Marxaladda hore, sababtoo ah tignoolajiyada aan qaan-gaarin, inta jeer ee shaqada ee nidaamka STL waxay ku koobnayd 1 GHz; Si kastaba ha noqotee, iyadoo ay ugu wacan tahay hagaajinta tignoolajiyada adag ee dawlad-goboleedka iyo kororka awoodda gudbinta ee shirkadaha baahinta, habka gudbinta ee nidaamyada ganacsigu waa mid aad u sarreeya sida 90 GHz. Si kastaba ha ahaatee, waddan kastaa uma oggola nidaamyada STL inay isticmaalaan tiro badan oo hawlqabadyo ah. Xadhkaha soo noqnoqda ee ay bixiso FMUSER waxaa ka mid ah 100MHz-1000MHz, 433-860MHz, 2.3-2.6GHz, 4.9-6.1GHz, 5.8GHz, iyo 7-9GHz, taas oo kaa dhigi karta mid aan ku xaddidnayn waaxda maamulka raadiyaha maxalliga ah.
Sharci ma tahay in la isticmaalo Nidaamka isku xidhka Daah-furka Studio-ga Dalkayga?
Jawaabtu waa haa, isku xirka istuudiyaha gudbiyaha waa sharci wadamada badankood. Si kastaba ha ahaatee, wadamada qaar, isticmaalka qalabka isku xirka istuudiyowyada waxaa xadidaya waaxda maamulka deegaanka. Waxaa lagaa rabaa inaad u soo gudbiso shahaadooyin khuseeya waaxda maamulka si aad u hesho shatiga isticmaalka.
Sideen Ku Go'aamiyaa Haddi Isku Xidhka Gudbiyaha Istuudiye Uu Leeyahay?
Kahor intaadan isticmaalin ama iibsan qalabka isku xirka gudbinta istuudiyaha, fadlan hubi inaad ka codsatay waaxda maamulka raadiyaha maxalliga ah shatiga isticmaalka nidaamka STL. Kooxdayada xirfadlayaasha ah ee RF ayaa kaa caawin doona arrimaha soo socda ee helitaanka shatiga - laga bilaabo wakhtiga qalabka la soo saaro si buuxda oo caadi ah oo badbaado leh.
Iyadoo la dardargelinayo magaalaynta adduunka oo dhan, nidaamka STL wuxuu noqday qayb aan laga maarmi karin oo ka mid ah istuudiyaha baahinta. Sida buundo u dhaxaysa shirkadaha baahinta iyo FM-ta, waxay ka fogaataa dhibaatooyin isdaba joog ah oo ay ka mid yihiin faragelin badan oo signalada, dhismayaal badan, dhererka magaalada oo la xaddiday, si shirkadaha baahinta ay u shaqeeyaan si caadi ah.
Ma rabtaa inaad bilowdo nidaamkaaga STL? Adiga oo ah iibiye qalab raadiye oo xirfad leh, FMUSER waxa ay ku siin kartaa istuudiyaha ADSTL tayo sare leh oo jaban si aad u gudbiso qalabka isku xirka. Haddii aad u baahan tahay inaad ka iibsato nidaamka ADSTL FMUSER, fadlan xor u noqo inaad nala soo xidhiidho.